Shiinaha oo ka cabsanayo in Coronavirus dibadda kaga yimaado |
Shiinaha oo ka cabsanayo in Coronavirus dibadda kaga yimaado
Shiinaha ayaa diiradda saarayo kiisaska cusub ee dibadda kaga imaanaya.
Waxay aaminsanyihiin in dadka dibadda ka imaanaya ay fayraska dib ugu soocelinayaan dalka.
Muddo bilooyin ah haatan, subax walba abbaaraha 03:00, saraakiisha Shiinaha ayaa isku soo ururiya xogtii ugu dambeysay ee ku saabsan faafitaanka fayraska, si ay dunida ula wadagaan. ilaa iyo 7-dii April, waxay diwaan-gelisay 81,740 kiisas iyo 3,331 dhimasho.
Dalkaas oo ah halka uu ka soo bilowday fayraska ayaa ammaan ku muteystay sida uu wax uga qabtay xasaradda. Agaasimaha Guud ee Hay`adda Caafimaadka Adduunka Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ku ammaanay Shiinaha sida dardarta leh ee ay wax uga qabatay xanuunka.
Balse iyadoo ay jiraan erayadaas diirran ee ka soo baxay WHO, waxaa shaki laga muujinayaa xogta rasmiga ah iyo sheegashada guulaha ku aaddan in Shiinaha uu ka gaaray xakameynta fayraska.
Toddobaadkii la soo dhaafay, wasiir sare oo ka tirsan dowladda Britain, Michael Gove ayaa BBC-da u sheegay “Qaar ka mid ah wararka ka soo baxaya Shiinaha ma caddeynayaan baaxadda, dabeecadda iyo faafitaanka fayraska”.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale toddobaadkii hore sheegay in tirada khasaaraha dhimashada iyo kiisaska xanuunka ee Shiinaha ay u muuqdaan kuw aan laga run sheegin.